Iyo iPhone 7 Mheni NzevePods dzinoonekazve mumufananidzo | IPhone nhau
Ndine kunzwa kuti tiri kuenda pamwero weinenge nyowani yekudonha / runyerekupe pazuva. Uye ndezvekuti angangoita maawa makumi maviri nemana mushure mamamodeli kana ekuratidzira mamodheru eiyo iPhone 24 yaonekwa, nhasi yakafanana svikiro atumira mapikicha akati wandei eanenge ari mahedhifoni anosvika mubhokisi padhuze neiyo iPhone 7. Imwe yenyaya dzekupokana dzeinotevera apple apple ndeyekuti inosvika isina chiteshi chefoni uye izvo zvinoratidzwa nemifananidzo ndezvimwe EarPods MheniNdokunge, mahedhifoni senge iwo avakaratidza muna 2012 asi aine Mheni yekubatanidza panzvimbo ye3.5mm jack.
Iyo mifananidzo, ino nguva yemhando yepamusoro uye inoratidza iyo Mheni EarPods kubva pese pese pingabvira kona, vatanga kutanga paWeibo. Gare gare ivo vakaburitswa muFrench svikiro uko, kana ukasaziva, anonyora Steve Hemmerstoffer, anozivikanwa zviri nani nekuve OnLeaks, iyo kune vakawanda ndiyo yakasarudzika firita yenguva yacho. Iye wechiFrench ndiye akaburitsa madhiidhi akasiyana siyana uye zvimwe zvinhu zvakawanda zveiyo iPhone 7 uye mamodheru apfuura, pamwe nezvimwe zvishandiso zvisina chekuita neApple.
Ndiwo here Mheni dzeMagetsi dzinouya neiyo iPhone 7?
Iko hakuna chakakosha nezve izvo zvinoratidzwa nemifananidzo. Chaizvoizvo, ndezve mahedhifoni ayo, zvirinani kunze, akafanana chaizvo neEarPods akaunzwa pamwechete neiyo iPhone 5, asi neiyi nyowani yekubatanidza, izvo zvinoita kuti tishamise kuti chii chichaitika kune mahedhifoni ane chinongedzo. 3.5mm isu tatova nayo. Runyerekupe rwakati Apple ichasanganisira mubhokisi a Mheni-3.5mm adapta kuitira kuti tikwanise kuenderera mberi nekushandisa mamwe mahedhifoni, asi izvo zvinosanganisira iwo Mheni EarPods zvinoita kuti ndisave nechokwadi neizvi mukana. Imwe runyerekupe yakataura kuti Apple yaizovhura angangoita mamwe mahedhifoni akakosha angave asina tambo, ndiko kuti, ivo vangangove izvo zvatinoisa munzeve. Kune rimwe divi, mahedhifoni aya, anogona kunzi AirPods, anogona kuve nekudzimiswa kweruzha.
Chero zvazvingaitika, zvese zvitsva mifananidzo yeiyo Mheni EarPods uye mahedhifoni avanofanira kuburitsa haasati ave ekuremekedza, chimwe chinhu chingangoitika munaGunyana.
UPDATESekureva kwaNoWhereElse, chiteshi chakatumira mifananidzo nguva pfupi yaonekwa paWeibo, mifananidzo yacho haisi kubva kuApple official EarPods.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 Mheni EarPods inowoneka zvakare mumufananidzo
Ungashinga sei kubvunza kuti "
Pindura David Hernandez
"Yakavimbika" sosi inovimbisa kuti bhatiri reiyo iPhone 7 ichave yakakura kupfuura iyo yeiyo iPhone 6s